अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस ८ मार्च ः महिलाहरुको अबस्था हिजो र आज - Darpan News
अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस ८ मार्च ः महिलाहरुको अबस्था हिजो र आज
२०७७, २३ फाल्गुन आईतवार १८:५५
बिश्वका धेरैजसो मुलुक मध्ये नेपाल पनि पितृसत्तामा आधारीत मुलुक हो, अझै पनि हाम्रो देशका कतिपय ठाउँहरुमा महिला र पुरुषको बिच ठूलो खाडल छ ।
यहाँको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनैतिक, प्रशासनिक लगायतका सबै क्षेत्रमा पुरुषको तुलनामा महिलाको पहुँच ज्यादै न्यून रहेको छ । नेपालको कुल जनसंख्याको आधा भन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिलाहरु राज्यका हरेक क्षेत्रमा पिछडीएका छन् । परम्परागत रुपमा जातिय बिभेद, चाँडो बिबाह, छोराको महत्व बढी जस्ता मान्यताका कारणले महिलाको बिकास सोचे जसरी हुन सकेको छैन, लैगिंक भिन्नताका कारण लैगिंक असमानता, साधन र स्रोतको अवसर आदिमा कमीका कारण नेपाली महिलाहरुको स्तर निकै पछि परेको छ । महिला हक, अधिकार र शसक्तिकरणका लागि बिभिन्न सरकारी निकाय र गैर सरकारी निकायहरुले कामहरु शसक्त रुपले गरिरहेका छन् । नेपालको संबिधानमा समेत महिला सम्बन्धि हक समेत सुनिश्चित गरिएको छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत नारीलाइ पुरुष सरह हरेक क्षेत्रमा समानता हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ बिभिन्न नारी सम्मेलन गरि सोहि घोषणा पत्रको बँुदा लाइ आधार बनाएर कामहरु भइरहेको अबस्था पनि छ ।
हामी देशमा गणतन्त्र आएर पनि नेपाली महिलाहरु स्वतन्त्र भएनन् र उनीहरुले न्याय पाउन सकेनन् भनिरहेका छौं । यसका पछाडि नेपालमा विद्यमान सामाजिक राजनीतिक बेथितिहरुले भूमिका खेलिरहेका छन् । हामीले समाजको आधारभूत तहमा रहेका यी समस्यालाई पहिचान गर्न सकेनौं भने घटना केन्द्रित भएर वा पीडकहरुको संख्या गनेर मात्रै महिला माथिको विभेद हटाउन सक्दैनौं । यहाँ महिला स्वतन्त्रता र समानताको सवालमा केन्द्रित रहँदै हाम्रो समाजमा महिलाहरुले झेल्दै आएका केहि बिद्यमान समस्याहरुलाइ कोट्याउने प्रयास गरेको छु । यसको उद्देश्य महिलामाथि हुने हरेक प्रकारका विभेदहरु पत्ता लगाउन र हटाउन सकियोस् भन्ने हो । विशेष गरी विभेदकारी एवं असभ्य दृष्टिकोणको शिकार बनिरहेका पुरुषहरुलाई सच्चिनका लागि यसले मद्दत गर्न सकोस् । महिला अधिकारका बारेमा प्रायः महिलाहरुले मात्र लेख्दै आएका छन् । तर, पुरुषहरुले पनि यसमा चासो दिन र आफ्नो समुदायको कमजोरीहरु माथि निर्मम हुन आवश्यक देखिन्छ ।
गणतन्त्रको फाइदा पुरुषलाई मात्रै भन्ने प्रश्न पनि यदाकदा सुन्न पाइन्छ । सन् २०११ मा इजिप्टमा पनि क्रान्ति भयो । क्रान्तिमा त्यहाँका महिलाहरु घुम्टो फालेर पुरुष सँगै संघर्षको मैदानमा उत्रिए । तर, क्रान्ति पछि त्यहाँ बलात्कारका घटना झनै बढेर गए । यौन हिंसा, महिलाको खरीद–बिक्री र दण्डहीनता झनै बढ्यो । त्यसपछि इजिप्टका महिला अधिकारकर्मीले प्रश्न उठाए, खै, यो क्रान्तिले हामी महिलालाई के दियो ? आफूले सुरक्षाको अनुभूति सम्म पनि गर्न पाएनन् । नेपालतिर फर्केर हेर्दा इजिप्टको क्रान्तिकै केहि वर्ष पछाडि हामी गणतन्त्रमा गयौं । हाम्रो देशको सन्दर्भा कुरा गर्नुपर्दा गणतन्त्र आइसकेपछि देशले महिला राष्ट्रपति पायो । महिला प्रधानन्यायाधीश, महिला सभामुख, उपसभामुख पायो । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि ठूलो संख्यामा महिलाहरु जनप्रतिनिधि बनेर नीति निर्माण तहमा पुगे । संविधानले महिलालाई आरक्षण सहित समान अधिकार प्रत्याभूत गर्यो । हाल आएर समाजमा महिलाहरु जहाँसुकै निर्वाधरुपमा लाग्न पाएका छन् । कानुनतः उनीहरुले समान अधिकार पाएका छन् । संसदमा पनि ठूलो संख्यामा महिलाको सहभागिता छ । हरेक चाडपर्बहरु, मेला महोत्सबहरुमा पनि महिलाको संख्या उल्लेख्य नै पाइन्छ । जुन घरमा नारी खुशी छिन्, त्यो घरमा भगवानको बास हुन्छ भन्ने भनाइ साबित भइरहेको छ ।
तर, के नेपाली महिलाहरुको अवस्था पुरुष सरह सम्मानजनक बनेको छ त ? समाजमा महिलाले समान अधिकारको उपभोग गर्न र समान व्यवहारको महसुस गर्न पाएका छन् त ? उनीहरुले सुरक्षाको अनुभूति गर्न पाएका छन् त ? गणतन्त्र आएपछि महिला हिंसा र बलात्कारका घटना कम भएका छन् या बढेका छन् ? समसामयिक घटनाक्रम तर्फ फर्किएर हेर्दा नेपालमा गणतन्त्र पनि महिलाहरुका लागि इजिप्ट क्रान्तिकै झल्को आउने अवस्थामा छ भन्दा अन्यथा नहोला । निर्मला पन्त र भागिरथी भट्टको बलत्कार पछिको हत्या जस्ता घटनाहरुले महिलाहरुलाइ फेरी एकपटक सोच्न बाध्य बनाएको छ । सम्झँदा पनि कहाली लागेर आउँछ अझै पनि कति निर्मला र भागिरथीहरुले अनाहकमा कहिले सम्म ज्यान गुमाउनु पर्ने हो ।
पछिल्लो समयमा राजनितीमा लागेका सक्रिय महिलाहरुलाइ पनि निरन्तर प्रहार आइरहेका छन् । दन्त्य कथा देखि मानब सभ्यताको बिकास र हालसम्मको परिबेशलाइ नियाल्दा महिलाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । धर्मशास्त्र लाइ नियाल्दा पनि देबताहरुको पालामा पुरुषहरुले नसकेर देबीहरुको रुप धारण गरेर महिलालाइ नै अगाडि सारेपछि ठूला ठूला युद्घहरु जितेका उदाहरण सुन्न सकिन्छ । प्रकृतीले नै महिला र पुरुषको समायोजन गरेको हो एकअर्काको आदर सम्मान बिना समाजमा न्याय सामानता र बिबेकशीलताको अन्त हुन्छ । समाज हिंसातिर जान्छ र दया करुणा जस्ता कुराहरु हराउँदै जान्छन् । समाजको नेतृत्व जस्तै राज्य संयन्त्रको नेतृत्व गर्ने हरुको हेराइ पनि घटिया भएको देख्न सकिन्छ, पछिल्लो समयका नेताहरुको अभिब्यक्ति सुन्दा ज्यान नै सिरीङ्ग भएर आउँछ, हैन मान्छको सोच किन यति बिध्न गिर्दै गइरहेको छ भन्या ? महिलाहरुको शरीर देख्ने पुरुषले आफ्नो अनुहारलाइ किन नदेखेको ? लैगिंक रुपमा नाम नै तोकेर महिला भएकै कारणले सक्दो गिराएर बोल्ने अधिकार कुनै पनि पुरुषलाइ छैन अचम्म लाग्छ, के महिला पदमा पुग्दा शरीरले र पुरुष पदमा पुग्दा दिमागले नै हो त ? यस्ता राजनितिक संस्कारले हामी समृद्घ नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ । हामीले सोचेजस्तो समाजको सृजना गर्न सक्दैनौँ महिलाको शरीर र हाउभाउलाइ लिएर गरिएको टिप्पणी अत्यन्तै निन्दनिय छ ।
देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि नेपाली महिलाले पनि पुरुषहरुसँगै काँधमा काँध मिलाएर लडेकै हुन् । माओवादी जनयुद्धमा लागेर बन्दुक बोकेका गाउँका विपन्न महिलालाई हेर्दा महिलाको योगदान स्पष्ट हुन्छ । नेपाली महिला चुलोचौको छाडेर, बालबच्चाको भविश्य बिगारेर राजनीतिक क्रान्तिमा नलागेको भए गणतन्त्र सायदै आउँथ्यो होला र ? तर, अहिले यसको प्रतिफल पुरुषहरुको भागमा बढी पर्न गएजस्तो देखिएको छ । किनभने, महिला राष्ट्रपति हुँदैमा आम महिलाले अधिकार र सम्मान प्राप्त गरे भन्नु भनेको एकजना पुरुष राष्ट्रपति बन्दाखेरि सबै पुरुषले मुक्ति पाए भन्नुजस्तै हो । महिला सभामुख र महिला प्रधानन्यायाधीशको हकमा पनि यही कुरा सत्य हो । जुन देशमा महिला राष्ट्रपति छन्, त्यही देशमा निर्मला पन्तहरुले न्याय नपाएको दृष्टान्त हाम्रा अगाडि छँदैछ । जनयुद्ध लडेका महिलाहरु हजारौंको संख्यामा पारिवारिक वियोगमा छट्पटाएका छन् । कतिपय महिला छापामारहरु यौन उत्पीडनको शिकार बनेका छन् । अन्तरजातीय विवाह गरेकाहरुलाई पुरुषले छाड्ने र सजातीय विहे गर्ने क्रम बढेको छ । घरेलु हिंसाको विरुद्ध बन्दूक बोकेका महिलाहरु नै घरेलु हिंसाको शिकार भएका छन् । डान्सबारबाट विद्रोह गरेर बन्दूक बोक्न हिँडेका युवतीहरुको गन्तन्य फेरि पुरानै ठाउँ बन्न पुगेको छ । महिलाले लडेको लडाइँ बेकारजस्तै बनेको छ ।
समाजमा जुवातास र जाँड रक्सीको बहानामा महिला माथिको अत्याचार फेरि मौलाएको छ । ‘भाटे कारबाही’ का भाटाहरु खै कता गए आज ? यो यथार्थले हामीलाई के निश्कर्ष निकाल्न बाध्य पार्छ भने गणतन्त्र स्थापना पश्चात नेपाली महिलाको अवस्थाबारे विश्लेषण गर्दा राजनीतिक तहमा को को महिला पुगे भन्ने गणनाले मात्र गुणात्मक अर्थ नराख्दो रहेछ । यसका लागि तल्लो तहका महिलाहरु जो हिजो चुलोचौकामा सीमित थिए उनिहरुको अबस्था हिजो भोगिरहेको यथार्थ भन्दा फरक भयो कि भएन भनेर बिश्लेषण गर्न आवश्यक रहेछ । गणतन्त्र अघि र पछिका महिला हिंसाका घटनाहरुको तुलनात्मक विश्लेषण गर्न जरुरी पर्ने रहेछ ।
वैदेशिक रोजगारीको सोझो असर महिला र वालवालिकामाथि परेको छ । ४० औं लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा नेपालको श्रमशक्तिमात्रै बाहिरिएको छैन, कसैका श्रीमान बिछोडिएका छन्, कसैका प्रेमी बाहिरिएका छन्, कसैका श्रीमती विदेशिएका छन् । कसैका बाबु र कसैका छोरो परिवारबाट टाढा बनेका छन् । महिलाहरु मात्र घरमा हँुदा परपुरुषहरुको शिकार हुनुपर्ने पीडा यथाबत नै छ, यो अवस्थामा एक्ली महिलाले पाइला पाइलामा असुरक्षित हुनुपर्छ र कतिपय अवस्थामा त बलात्कृत हुनुपर्ने र मारिनुपर्ने घटना समेत हुने गरेका छन् । परिवारिक विश्रृंखलताले देशमा विभिन्न प्रकारका सामाजिक समस्या निम्तिने क्रम झनझन् बढिरहेको छ ।
घर घरमा बुहारीहरुले श्रीमानको अभावमा बुहार्तनको थप पीडा सहनुपरेको छ । बिहे गरेर रमाउने उमेरका पति विदेश जाँदा त्यसले महिलामा उत्पन्न गर्ने मनोवैज्ञानिक असर पीडादायी छ । यस्तो पीडा नेपालका लाखौं महिलाले व्यहोर्नु परिरहेको छ । यो प्रसंग किन महत्वपूर्ण छ भने देशमा रोजगारीको वातावरण सृजना नहुनु र युवाहरु विदेशिनुपर्ने परिस्थितिको प्रत्यक्ष शिकार महिलाहरु हुनु परिरहेको छ ।
संविधानमा जतिसुकै समान अधिकारको कुरा लेखिए पनि देशमा उद्योगधन्दाको विकास र अर्थतन्त्रमा सुधार नहुँदासम्म महिलाहरु माथि न्याय होला जस्तो लाग्दैन । विगतमा इन्डियन आर्मी, ब्रिटीस आर्मीको भर्तीले नेपाली महिलालाई यस्तै मनोवैज्ञानिक पीडा दिने गरेको थियो । उमेर भएसम्म श्रीमानको छुट्टी पर्खेर बस्नुपर्ने स्थिति थियो लाहुरे परिवारका महिलामा । अहिले खाडी मुलुकको रोजगारीले लाखौं महिलालाई त्यस्तै मनोवैज्ञानिक पीडा दिइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीको असर प्रत्यक्ष रुपमा महिलामा नै सबैभन्दा बढी परेको तीतो सत्य हो यो ।
नेपालमा वैदेशिक रोजगारी सँगसँगै स्वदेशी रोजागारीमै पनि महिलाले प्रताडीत हुनु परेका धेरै दृष्टान्त छन् । पढेलेखेका महिलाहरु नै कार्यालय स्तरमा हिंसाको शिकार बन्नुपरेका कैयौँ उदाहरण हाम्रो समाजमा छन् । ०४६ सालको परिवर्तनपछि देशका उद्योगधन्दा हरु बिस्तारै खस्किदैँ गए । त्यससँगै गाउँका मानिस जीवन निर्वाहको खोजीमा शहर पस्न बाध्य भए । कृषिमा आधारित उपभोगमुखी गाउँले अर्थव्यवस्था ध्वस्त भयो । किसानहरु शहरिया श्रमिकमा फेरिन थाले । ठीक त्यहीबेला ०५२ सालदेखि माओवादीले सशस्त्र गतिविधि सुरु गरेपछि गाउँहरु चरम संकटमा परेर चौपट बने । गाउँमा बस्न गाह्रो भएपछि मान्छेहरु दैनिक गुजारा टार्न आफ्नो थातथलो छोडेर शहर पस्न थाले ।
गाउँका महिला सुरुमा कारखानाहरुमा काम गर्न शहर पसे । कतिपयलाई राम्रो काम लगाइदिने बहानामा गाउँबाटै उठाएर दलालहरुले भारतका कोठीमा बिक्री गरे । स्वदेशकै सहरमा पनि गाउँले युवतीमाथि चरम शोषण हुन थाल्यो । सस्तोमा काम लगाउने, कार्यस्थलमा यौन शोषण गर्ने, डान्स बारहरु खोलेर महिलाको अस्मिताको व्यापार गर्ने धन्दा नेपालका विभिन्न शहरमा माओवादी द्वन्द्वकालभरि मौलाइरह्यो । त्यसको अवशेष अझै शहरहरुमा बाँकी छ ।
यसवीचमा सरकारले कतिपय देशमा महिलालाई रोजगारीमा जान प्रतिबन्ध लगायो । तैपनि महिलाहरु जाने क्रम रोकिएको छैन । रोकियोस् पनि कसरी ? देशमा न रोजगारीको वातावरण बनेको छ, न त महिलालाई हेर्ने पुरुषवादी नजरमा नै कुनै परिवर्तन आएको छ । यसमा अर्को तर्क पनि छ– महिलाले काम गर्न जान पाउनुपर्छ, पुरुषसरह काम गर्ने अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने ।
कतिपय पुरुषको महिलालाई हेर्नेे नजर नै दोषी छ । महिलाले समाजमा समान अधिकार, न्याय र सम्मान प्राप्त गर्नका लागि देशभित्र रोजगारीको सिर्जना र अर्थतन्त्रको विकास त अपरिहार्य छ नै तर, यतिले मात्र पुग्दैन । जबसम्म पुरुषले महिलालाई समदृष्टिले हेर्दैन र घुरेर हेर्छ, त्यतिबेलासम्म महिलाले न्याय र समानताको महसुस गर्न सक्दैनन् । संविधानले महिलालाई अधिकार पनि दिएको छ तर पुरुष प्रधान समाजले महिलालाई हेर्ने पुरानो सामन्ती नजरमा खासै सकारात्मक परिवर्तन आएको छैन ।
तपाईँ हामी अमेरिका, युरोप वा एशियाकै विभिन्न देशहरुमा घुम्न गयौँ भने छोटो लुगा जुनसुकै महिलाहरुले लगाइरहेका हुन्छन्, त्यहाँ अरुले लगाएको लुगाको बारेमा कसैले व्यक्तिगत टिप्पणी गर्दैन । अरुको पहिरनको बारेमा चर्चा गर्नु असभ्यता मानिन्छ । पश्चिमा मुलुकमा मात्रै किन ? नेपालमै हेरे पनि हुन्छ । नेपालीकै घरघरमा, सहरहरुमा युवतीहरु सजिला लुगा लगाएर स्वच्छन्द तरिकाले हिँड्न थालिसकेका छन् । तैपनि पुरानो मानसिकता बोकेका पुरुषहरु महिलाका लुगाको साइज नापेर बसिरहेका छन् । यो एउटा असभ्यताको दृष्टान्त हो । जो ब्यक्ति यस्ता झिना मसिना विषयमा टिप्पणी गरेर बस्छ, उसले या त संसारको सभ्यतालाई चिनेको छैन, या त आफैंभित्रको असभ्यतालाई देखेको छैन ।
महिलाको लुगाको साइजलाई हेरेर अश्लीलताको परिभाषा गर्न खोज्ने पुरुषहरुलाई ओशोले ठीकै जवाफ दिएका हुन् । आशोको भनाइ के छ भने छोटा लुगा लगाएर स्वच्छन्द रुपमा हिँड्ने युवतीहरु अश्लील होइनन्, बरु उनीहरुलाई हेरेर जिब्रो पड्काउने वा आँखा तन्काउने पुरुषहरु चाहिँ अश्लील हुन् । ओशोले आफ्ना चर्चित दुई प्रवचन ‘युवक र यौन’ अनि ‘नारी र क्रान्ति’ मा अश्लील पुरुषको धज्जी उडाएका छन् । यदि पुरुषले महिलालाई समान दृष्टिले हेरिदिने हो भने यसबाट महिलाले हिंसाको सिकार हुनुपर्ने थिएन र त्यो पुरुषको उर्जा पनि सकारात्मक ठाउँमा, मानव समुदायको हितमा प्रयोग हुन सक्थ्यो । पुरुषले महिलालाई समान दृष्टिले हेर्न नसकेकै कारण कार्यस्थल वा सार्वजनिक स्थलहरुमा महिलामाथि यौन हिंसाजन्य व्यवहार हुने गरेका हुन् । महिलाले साँझपख एक्लै हिँड्दा आक्रमणको शिकार हुनुपरेको कारण पनि यही हेराइको समस्याले गर्दा नै हो ।
नेपाली समाज तीव्र गतिमा आधुनिकीकरणतर्फ अगाडि बढिरहेको छ । नेपाली महिलाहरु चेतना र फेसन दुबै हिसाबले आधुनिकता तर्फ तीव्रगतिमा दौडिइरहेका छन् । तर, आफ्नै घरभित्रका पुरुषहरुले महिलामा आएको यो सामाजिक क्रान्तिलाई पचाउन नसक्दा विरोधाभाष देखा परेको अवस्था पनि छ । घरभित्रको आधुनिकीकरणमा पुरुषहरु बाधक बन्न थालेको अवस्था पनि कतिपय परिवारमा देखिन्छ । जस्तो बाबु वा दाजु सडकमा निस्कन्छ र अरुका छोरीचेलीले छोटो लुगा लगाएको विषयमा चियोचर्चो गर्छ । तर, उसकै घरबाट हाफ पाइन्ट वा कट्टुमात्रै लगाएर छोरी चेली हिँड्न थालिसकेको चाहिँ उसले बिर्सन्छ । पुरुषले हाफपाइन्ट लगाएर बजार डुल्न हुन्छ भने महिलाले किन नहुने ? हाम्रो पुरुषप्रधान समाजले मानव सभ्यताको यो गतिलाई आत्मसाथ गर्न सकिरहेको छैन ।
नेपाली समाज यतिबेला आधुनिकतावाद र परम्परावादको संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ । हाम्रो समाजका पुरुषहरुमा एकल महिला, सम्बन्ध विच्छेद गरेर बसेका महिला वा विहे नै नगरी बसेका महिलालाई हेर्ने नजरमा निकै ठूलो दृष्टि दोष छ । एकातर्फ श्रीमानको मृत्यु भएपछि प्राय बिहे नगरी बस्ने महिलाहरुमा पुरातन सोचाइ छ, अर्कातिर त्यस्ता एकल महिलामाथि ‘इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ’ गर्न खोज्ने पुरुषहरुको बिगबिगी छ । यही कारणले गर्दा एकल महिलाले पलपलमा पुरुषहरु सँग डराएर हिँड्नुपरेको पीडा सुन्ने गरिएको छ । एकल महिलाको हकमा मात्रै होइन, श्रीमान विदेश गएको अवस्थामा एक्लै घरबार चलाइरहेका महिलाहरुको हकमा पनि हाम्रो पुरुषवादी समाजको नजर त्यही प्रकारको छ । कतिपय महिलाहरुले श्रीमान बिदेशबाट फर्किँदा कमाएर पठाएको सम्पत्ति पनि सक्ने र घरबार पनि त्यागेका उदाहरण हाम्रो समाजमा छन् । पुरुषहरुको यो भ्रमका कारण समाजमा महिलाहरुले असुरक्षा महसुस गरिरहनुपरेको छ ।
नेपाली समाजमा महिलालाई हेर्ने विभिन्न प्रकारका विचारधाराहरु वा स्कुलिङ छन् । तीमध्ये एउटा कम्युनिष्ट स्कुलिङ हो । एउटा हिन्दु विधिशास्त्रीय स्कुलिङ हो । एउटा प्रथाजन्य स्कुलिङ पनि छ । पछिल्लो विचारधारा नारीवाद पनि हो । व्यवहारिक रुपमा हेर्दा खेरि व्यवहारवादी प्रयोग सबैभन्दा ठूलो स्कुलिङ हो । यी सबै विचारधाराको ब्याख्या नगरी छोटकरीमा प्रष्ट्याउने प्रयास गरेको छु । दोस्रो संबिधान सभाको निर्बाचन पछि कम्युनिष्टहरुले महिलालाई समान अधिकारको वकालत गरेको र यसले सकारात्मक योगदान दिएको भएता पनि कम्युनिष्ट पार्टीभित्रै पुरुषहरुले महिलाहरुलाइ अत्यन्तै नीच शब्दहरु प्रयोग गर्ने र यौन हिंसाको शिकार हुनुपर्ने स्क्याण्डलहरु हुने गरेका छन् । हिन्दु समुदायमा नारीलाई देवी मान्ने र नारीलाई विभेद गर्ने दुवै अवस्थाहरु पाइन्छन् । नेपालका किराँत लगायत जनजातिहरुले अभ्यास गरेको संस्कृतिमा चाहिँ महिलाले मातृसत्ताको उपभोग गर्ने र बढी महिला अधिकार उपभोग गर्ने गरेको मान्यता छ । तथापि जनजाति आन्दोलनमा लागेका महिलाहरु यदाकदा यौन हिंसाको शिकार भएका घटनाहरु पनि सुनिएका छन् । नारीवादी स्कुलले विद्रोहस्वरुप पुरुषजातिको कडा विरोध गर्ने गरेको छ । यसका सकारात्मक र स्वाभाविक परिणामहरु छन, महिला अधिकारको आन्दोलनमा । यसका साथै मिटु अभियानले कामुक पुरुषहरुको मुटुमा ढ्यांग्रो बजाएर रामै्र काम गरेको छ । यो हतियारको दुरुपयोग भएन भने मिटु अभियानले महिलाको आत्मसम्मान बचाउन सहयोग गर्नेछ । नेपाली समाजको व्यवहारवादी स्कुल छ यो चाहिँ निकै रमाइलो र फराकिलो छ । यो व्यवहारवादी पद्घती अनुसार एक जना नेपाली चेली पार्टीमा बियर खाएर हिँड्न सक्छिन् र तीनै चेली तीजमा साडी लगाएर ब्रत पनि बस्न सक्छिन् । बिहे गर्न पनि सक्छिन्, एक्लै बस्न पनि सक्छिन् । उनले पुरुषलाई माफी दिन पनि सक्छिन्, कारवाही गराउन पनि सक्छिन् । यसखालको फराकिलो अधिकार र स्वतन्त्रता सहितको सकारात्मक नेपाली समाज पनि सतहमा विकसित हुँदै आइरहेको छ र यस्तो स्वच्छन्दतालाई विस्तारै समाजले पचाउँदै जान थालेको छ । महिलाका बिभिन्न रुप हुन्छन् भन्ने कुरालाइ यसले आत्मसात् गरेको छ ।
त्यसैले के भन्न सकिन्छ भने नेपाललाई वैदेशिक रोजगारीको समस्याबाट बाहिर ननिकालेसम्म महिलामाथि न्याय हुन सक्दैन । देशमा बेरोजगारी समस्या बढ्यो र परिवारको जीवन कष्टप्रद हुँदै गयो भने समाजमा महिलामाथिको असुरक्षा बढ्छ । गरीवीका कारण महिलाले हरेक ठाउँमा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । महिलाहरु पनि आत्मनिर्भर बन्न सक्नुपर्छ । देशमा आर्थिक उन्नती नहुँदासम्म महिलाहरु निर्वाचित भएर सत्तामा पुगेका भरमा मात्रै समानता प्राप्त हुँदैन ।
यसका अतिरिक्त आर्थिक उन्नतिले मात्र महिलाहरुले समान न्याय पाउन सक्दैनन्, पूर्ण समानताका लागि पुरुषले महिलालाई हेर्ने नजरमा समान दृष्टि आबश्यक छ । अन्यथा, संसद भवन भित्रै महिलामाथि खराब नजरले हेर्नेहरुको बिगबिगी कम हुने वाला छैन । सरकारी कर्मचारी, पत्रकारिता, सेना–प्रहरी, राजनीति वा ब्याबसायिक क्षेत्र जहाँसुकै यो लागू हुन्छ ।
यस्तो बेलामा खासगरी महिला–पुरुषको सम्बन्ध र महिला अधिकारका सवालमा स्वस्थ सामाजिक बहस भयो भने यसबाट समाजलाई सकारात्मक बाटोमा अगाडि बढाउन सकिन्छ । हाल आएर पढेलेखेका पुरुषहरु नै अर्काको चासो गर्न उद्यत देखिन्छन् । महिलाको पहिरन जस्तो नितान्त व्यक्तिगत विषयमा पुरुषहरुले चियोचर्चो नगर्ने हो भने आफ्नै घरका र छिमेकका महिलाको कुरा काट्न छोड्ने होे भने को सँग को हिँड्यो ? को बोल्यो ? के खायो ? कसले कसलाइ फोन गर्यो ? भन्ने कुराको मतलब नगर्ने हो भने महिलाले शान्ति र समानताको महसुस गर्न थाल्नेछन् ।
त्यसैले अवसर पायो भने महिलाले पनि पुरुषले भन्दा राम्रा काम गरेर देखाएका छन् तसर्थ महिलालाइ बिश्वास गर्ने , नेतृत्वलाइ बिश्वास गर्ने, महिलाको निर्णायक क्षमतालाइ बिश्वास गर्ने बातावरणको सृजना गर्न जरुरी छ । लैंगिक असमानता अन्त्य गर्ने, महिला हिंसाको अन्त्य गर्ने जुन अभियान छ यो अभियानले महिलालाइ मात्र होइन पुरुषलाइ, परिवारलाइ, समाजलाइ र देशलाइ फाइदा गर्दछ । महिला र पुरुष बिचको बिभेद अन्त्य गरौँ महिला हिंसा अन्त्य गरौँ भनेर महिला लाइ मात्र नभएर पुरुषलाइ समग्र समाजलाइ र यो राज्य ब्यबस्थालाइ नै यो आहवान गर्न चाहन्छु । महिलाहरु लाइ सबल र सक्षम बनाउन आर्थिक उपार्जन सँग जोड्नुपर्ने पनि हुन्छ , ब्यावसायिक पनि बन्नुपर्ने हुन्छ तबमात्र मुलुक समृद्घिको दिशातर्फ अघि बढ्नेछ ।